हाम्रै माटो सुहाउँदो गजल लेखौँ ! | Hamro Biratnagar
गृह पेज विचार हाम्रै माटो सुहाउँदो गजल लेखौँ !
– घरमै प्राय पुस्तकहरू अध्ययन गर्छु, साहित्य सिर्जना गर्ने गर्छु ! र लाइभ प्रोग्रामहरूमा सहभागिता जनाउछु ।अधिकांश समय अध्ययन र साहित्यिक छलफल तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत स्रष्टाहरूसँग कुराकानीमा बितेको छ ।
यस्तो हो ! आफूले देखेका, सुनेका, पढेका र भोगेका कुराहरूलाइ नै शब्दमा उनेर मीठो रूपमा प्रस्तुत गर्ने कला हो साहित्य । कसैले प्रकृतिमा लेख्छ्न् कसैले प्रवृत्ति मा … । म मानवकाे प्रवृत्तिमा लेख्ने गर्छु बढीजसो र सबैको आआफ्ना धार हुन्छन् । कसैले माया प्रेम, कसैले वियोग, कसैले जीवनजगत् त कसैले जीवन दर्शन, वैचारिक गहन र कसैले राजनीतिमा त काेही समाजका विकृति र विसङ्गतिमाथि प्रहार गर्लान् ….! यी धारमध्ये म चाहिँ माया प्रेम र वियाेग नै बढी लेख्छु र प्रेममा घात गर्नेहरूप्रति अलि बढी खनिन्छु । मेरो वास्तविक जीवनसँग त्यति यसको प्रभाव भने होइन !
तस्वीर/भिडियाे – राेमु अधिकारी
त्यही हेराइले मार बरु मरण झनै मीठो……यो गीत यसरी बन्यो – मेरा अति मिलनसार मित्र संगीतकार राम कार्की इटहरी हलगडा निवासी हाल काठमाडौमा हुनुन्छ। वहाँले काठमाण्डौँकाे कोटेश्वरमा संगीत विद्यालय नै खोलेर बस्नुभएको थियो । म वहाँकामा बारम्बार आउने जाने गर्थेँ । वहाँलाइ नेपाली चलचित्र ब्याड ब्याइका लागि संगीत भर्ने अफर आएकाे रहेछ । मलाई त्यतिबेला नै एउटा रोमाञ्चक गीत लेख्नुस् रोमुजी भन्नु भयो । निर्माता वरुण अधिकारी पनि आइपुग्नु भयो । वहाँले हुन्छ लेख्नुस् भनेपछि लेखियाे । सबैले मन पराएपछि दीपक लिम्बूले गाउनुभयाे ।
अघिल्लो समाचारविराटनगरका ५८ सहित प्रदेशभर १६६ जनामा संक्रमण, नेपालभरकाे संक्रमण दर अहिलेसम्मकै उच्च
अर्को समाचारबाढीमा परेर एक महिने बालकको मृत्यु
जिन्दगीमा यहाँभन्दा केही नहोओस् !